Mabasa Evaapostora 14:1-28
Kuwedzera kwevanhu uye kupikiswa muIkoniyumu (1-7)
Vanofungirwa kuti ndivanamwari muRistra (8-18)
Pauro anopotsa afa achitemwa nematombo (19, 20)
Kusimbisa ungano (21-23)
Kudzokera kuAndiyoki yekuSiriya (24-28)
14 Vava muIkoniyumu vakapinda vese musinagogi revaJudha uye vakataura zvekuti vanhu vakawanda vechiJudha nevechiGiriki vakava vatendi. 2 Asi vaJudha vakanga vasingatendi vakakusvudzira vanhu vemamwe marudzi vakavafurira kupandukira hama.+ 3 Saka vakatora nguva yakawanda vachitaura neushingi nesimba raJehovha,* uyo akapupurira shoko renyasha dzake nekubvumira kuti vaite zviratidzo nezvishamiso.+ 4 Asi vanhu vakawanda veguta iri vakatadza kuwirirana; vamwe vaitsigira vaJudha, vamwe vachitsigira vaapostora. 5 Vanhu vemamwe marudzi nevaJudha nevatongi vavo pavakaedza kuvanyadzisa uye kuvatema nematombo,+ 6 vakaudzwa nezvazvo, vakatizira kumaguta eRikaoniya, Ristra neDhebhe, nenyika yakapoteredza.+ 7 Vava ikoko vakaramba vachizivisa mashoko akanaka. 8 MuRistra maiva nemumwe murume akanga akagara pasi. Akazvarwa akaremara makumbo, uye akanga asati ambofamba. 9 Murume uyu akanga akateerera Pauro achitaura. Pauro akaramba akamutarisa, akaona kuti aitenda kuti aigona kuporeswa,+ 10 ndokuti nenzwi guru: “Simuka umire.” Saka murume wacho akati kwanyanu, akatanga kufamba.+ 11 Vanhu pavakaona zvakanga zvaitwa naPauro, vakashevedzera mumutauro wechiRikaoniya vachiti: “Vanamwari vava sevanhu uye vadzika kwatiri!”+ 12 Vakabva vatanga kudana Bhanabhasi kuti Zeusi, Pauro vakamuti Hemesi, sezvo ari iye aitungamirira pakutaura. 13 Uye mupristi waZeusi, uyo aiva netemberi yaiva pagedhi reguta, akauya kumagedhi nemikono yemombe nezvishongo zvemashizha zvemumusoro achida kupa zvibayiro aine vanhu vakawanda. 14 Asi muapostora Bhanabhasi nemuapostora Pauro pavakazvinzwa, vakabvarura nguo dzavo, vakamhanyira mukati mevanhu, vachishevedzera kuti: 15 “Varume, muri kuitirei zvinhu izvi? Isu tiri vanhu vakangoitawo semi.+ Uye tiri kukuzivisai mashoko akanaka, kuti imi mubve pazvinhu izvi zvisina zvazvinobatsira mutendeukire kuna Mwari mupenyu, akasika denga nenyika negungwa nezvinhu zvese zviri mazviri.+ 16 Muzvizvarwa zvakapfuura akabvumira marudzi ese kuti afambe munzira dzawo,+ 17 kunyange zvazvo asina kurega kuzvipupurira+ pakuti akaita zvakanaka, achikupai mvura yekudenga nemwaka inobereka zvibereko,+ achikugutsai nezvekudya uye achizadza mwoyo yenyu nemufaro.”+ 18 Asi pasinei nezvavaitaura, vakatadza kudzora vanhu kuti varege kuvabayira zvibayiro. 19 Asi vaJudha vakasvika vachibva kuAndiyoki neIkoniyumu ndokufurira vanhu,+ uye vakatema Pauro nematombo, vakamuzvuzvurudzira kunze kweguta, vachifunga kuti afa.+ 20 Asi paakaunganirwa nevadzidzi akamuka, akapinda muguta. Mangwana acho akasimuka naBhanabhasi vakaenda kuDhebhe.+ 21 Pashure pekuzivisa mashoko akanaka muguta iroro nekuita kuti vakawanda vave vadzidzi, vakadzokera kuRistra, kuIkoniyumu, uye kuAndiyoki. 22 Vakasimbisa vadzidzi ikoko,+ vachivakurudzira kuramba vari mukutenda vachiti: “Tinofanira kupinda muUmambo hwaMwari nemumatambudziko akawanda.”+ 23 Vakagadzawo vakuru muungano imwe neimwe,+ vachinyengetera pamwe nekutsanya,+ uye vakavaisa mumaoko aJehovha,* uyo wavakanga vava kutenda maari. 24 Vakabva vapfuura nekuPisidhiya, vakasvika kuPamfiriya,+ 25 uye pashure pekuzivisa shoko muPega, vakadzika kuAtariya. 26 Vakabva ikoko vakananga nechikepe kuAndiyoki, kwavakanga vanyengetererwa kuti Mwari avakomborere pabasa ravakanga vapedza iye zvino.+ 27 Pavakanga vasvika uye vaunganidza ungano, vakarondedzera zvinhu zvakawanda zvakanga zvaitwa naMwari achivashandisa, uye kuti akanga avhurira vemamwe marudzi suo rekutenda.+ 28 Saka vakamboti garei nevadzidzi.